Sida loo kala tagney / Goo / goo AVI Files Si fudud
> Resource > Video > AVI Splitter: Sida loo Split / Goo / goo AVI Files Si fudud
AVI Splitter: Sida loo Split / Goo / goo AVI Files Si fudud
Files tageynaa sida caadiga ah waa mid fudud quruxsan, laakiin wax dheeraad ah ka heli kartaa adag haddii files ee ku jira xubno aan la rabin ama aan loo baahnayn. Avi videos yihiin sida caadiga ah ballaaran sababtoo ah waxay la ratio hoose riixo oo xajisto tayada ilaa xad badan oo soo socda. Haddii aad rabto in aan kala tagno files AVI si loo yareeyo xajmiga file si ay noqon kartaa yara si fudud la wadaago ama ku kaydsan. Haddii aad rabto in aad si deg deg ah kala jabeen file AVI ah burburi badan leh tayo waayi maayo, markaas eegi jirin dheeraad ah ka badan qalab cajiibka ah Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) .
Easy in la isticmaalo AVI Video Splitter: Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Split file a AVI weyn files AVI yar
Jar qaybaha aan loo baahnayn oo ay ku biiraan qaybaha soo xulay
Save the video cusub oo qaabab kala duwan si ay u wadaagaan online ama gubi in DVD.
1. files Import AVI
Guji "Import" in ay ku shuban files AVI aad barnaamijka. Dhammaan files raran lagu soo bandhigi doonaa sida thumbnails in ay leeg- bidix. Markaas jiidi oo hoos u clip ah u gal Timeline ah.
2. Split AVI gudbiyo la mid click
Muujinta video ah, oo jiidi slidebar ee suuqa kala previewing in ay tagaan barta meesha aad rabto in aan kala tagno. Guji "hako" Abd ka dhacay icon maqas ee toolbar ah in uu kala jabiyo AVI clip laba qaybood.
Hadda laga takhaluso qayb ka mid ah aan la rabin oo ay si fudud u garaacid "Delete" aad keyboard.
Talo: Waxaad riix kartaa Zoomer Timeline ee goobta saxda ah iyo video tafatirka.
3. badbaadi file kala AVI ah
Marka aad hesho doonayay qayb AVI, guji "Abuur" si ay u helaan suuqa kala saarka. Halkan, waxaad dooran kartaa qaab video sida AVI, wmv, MOV, MP4, iwm si loo badbaadiyo on your computer. Ama si toos ah qalab aad u dhoofiyaan by gaaray horena ka filaayo. Haddii aad rabto inaad la wadaagto abuurkiinna on YouTube, tag kaliya ee ku aadan ikhtiyaarka.
Video Tutorial: Sida loo jar / Split / goo AVI Videos
Sida loo Resize AVI Video Files
Sidee inay la midowdo AVI Videos
Sida loo yareeyo awoodda AVI
Sida loo Edit AVI Video Files
Sida loo dar Cinwaan in AVI Files
Sida loo Edit iyo dar metadata in AVI